Imveliso yokuKhuselwa kweMidlalo-Abavelisi boKhuseleko eMidlalo base China, abaThengisi
Bopha isinqe esinqeni
Yenziwe nge-100% ye-neoprene, uyilo oluhlengahlengisiweyo lwe-velcro lilingana nobungakanani obuyi-46 inches, ekhululekile ukunxiba kwaye lubonakale phantsi kokubonakala kokuphuma. Kuyanceda ukunyusa umzimba wakho ukutshisa iikhalori ezingaphezulu kunye nokunciphisa ubunzima bamanzi kule ndawo kwaye nokuba uphefumle. Ngokungafaniyo namanye amabhanti anqumlayo esinqeni, le bhanti inepokotho, ke ngoko unokubeka iselfowuni, imali, izitshixo, ikhadi letyala njalo njalo epokothweni yakho ngelixa uthamba.
I-nylon esinqeni esinqeni
Izithsaba ezintlanu ezixhasayo zongeza inkxaso yesinqeni kwaye zibonelela ngokukhuseleka okungcono, ukuphefumla kunye nelaphu elithandekayo linolusu. Ubunzima bokukhanya kunye nokulula ukunxiba zombini ngaphakathi nangaphandle. Imitya ephindwe kabini ephezulu inokukunceda uhlengahlengise kwaye unyuse ukulungiswa kwesinqe. Nciphisa iintlungu zakho ze-lumbar kwaye ugcine isinqe sakho siqonde, silungele onke amaxesha onyaka.
Ivumela uluhlu olupheleleyo lokuhamba ngelixa unika inkxaso ekhululekile. Imitya emibini yohlengahlengiso inikezela ukulungelelana okulungiselelwe kunye nokucinezelwa. Iiphaneli ze-mesh zikhupha ubushushu obugqithisileyo kunye nokufuma. Yilelwe ngokufanelekileyo ukuze inciphise ukutyibilika kunye nokuqhekeza. Imagnethi esempilweni iqhuba ukubanda kwaye ikugcine ufudumele, ikhawuleze ukujikeleza kwegazi ukukhuthaza imetabolism.